Bufee Ozi na Ama | Martech Zone
Kwa ụbọchị anyị na-enyocha anyị mata si Agbaze mmiri, ma ọ bụ onye nkwado, ma nyochaa ọtụtụ azụmaahịa metụtara infographics na weebụ. Kwa izu anyị họọrọ ịghara ibipụta ọtụtụ narị infographics, agbanyeghị. Anyị na-etolite infographics onwe anyị ma ọ bụghị na anyị bụ snobs… ọ bụ naanị na anyị ghọtara ihe na-arụ ọrụ infographic na ihe na-adịghị.
Ihe omuma ihe omuma nke oma nchịkọta ozi nwere ihe ndị a:
Akụkọ Na-atọ ụtọ - n'ozuzu ya, ekwesịrị inwe ụfọdụ isiokwu na nchịkọta nke data na eserese. (Lee Gbochie Brelọ Agbaji-ins na oru na gburugburu Halloween)
Na-akwado Research - iji kwado akụkọ a, ọ dị mkpa na infographics nwere ntụnye aka na nyocha nke atọ. (Lee Nnyocha nke Ndu Akara)
Mmechi - mmeghe dị mma mgbe niile, mana njedebe bụ ihe dị mkpa. Kedu ka ị ga - esi metụta mmadụ na - enweghị ihe ị na - eme iji nweta data na akụkọ? (Lee Etu esi gha eme Nduzi Software na - akwalite Ahia)
Identification - onye ka ị bụ na gịnị kpatara na ị bụ ikike n’isiokwu a? Ọ ga-eju gị anya na ọtụtụ infographics m nyochaa nke dị oke mma… mana enweghi ụzọ iji mata isi mmalite ahụ. (Lee Etu esi ewulite ebe data)
Kpọọ-na-Action - M katọrọ ụlọ ọrụ na nso nso a maka enweghị CTA na infographic ha. Ha kwuru na ha achọghị ịbịa dịka ire ere. Agatụghị m ere ha… Naanị m gwara ha ka ha gwa onye ọbịa ihe ọ ga-eme. (Lee Ileba Azụmaahịa maka Njikwa Akụ Ahịa)
Ọtụtụ infographics dị nnọọ puke ụyọkọ nke nnukwu stats n'ime a mara mma imewe. Ihe si na ya pụta bụ nchịkọta ozi. Ndị mmadụ ga-efunahụ ma nọrọ na mgbagwoju anya site na data ahụ karịa infographic na-akụziri ndị na-agụ ihe ihe kpatara ihe ọmụma ahụ bụ.
Enwere nwepu, n’ezie, dịka kemmeochi infographics (lelee nke anyị Lovehụnanya na Alụmdi na Nwunye na Ihe kpatara ndị mmadụ ji soro gị na Twitter) ma ọ bụ nzọụkwụ site na nzọụkwụ infographics (lelee Nzọụkwụ 10 maka Ijikwa Nkwukọrịta Nsogbu).
Tags: infographicihe omuma ihe omumanchịkọta ozi